PREMIER LEAGUE: Conte oo guul ku furtay Premier League kaddib markii ay Chelsea dirqi uga adkaatay West Ham…+SAWIRRO – Gool FM
PREMIER LEAGUE: Conte oo guul ku furtay Premier League kaddib markii ay Chelsea dirqi uga adkaatay West Ham…+SAWIRRO
(London) 15 Agoosto 2016. Antonio Conte iyo kooxdiisa Chelsea ayaa guul ku furtay kulankoodii furitaanka Premier League kaddib markii ay 2-1 ku mareen West Ham oo ku soo booqatay Stamford Bridge.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala natay 0-0.
Chelsea ayaa ku gacan sareysay ciyaarta qeybtii hore inkastoo aysan wax gool ah helin, laakiin fursado ayaa soo maray sida mid uu Hazard khasaariyay, Ivanovic mid uu ku dhawaaday iyo laadka xorta oo laga bad baadiyay William.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta bilowgeedii naadiga Chelsea ayaa la timid goolkeedii ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareedka cusub waxaana u saxiixay xiddigooda Eden Hazard daqiiqadii 47-aad kubbad rigoore ahayd uu ka galiyay halka sare ee goolka.Waanaa goolkii 5000-aad ee Chelsea heerka sare.
Payet ayaa badel ku soo galay dabadeedna koorno uu soo tuuray ayaa waxaa madaxa galay James Collins waa laga soo celiyay misane lug ayuu ku dhaliyay goolka wax u muuqday in gacan lagu taabtay daqiiqadii 76-aad, ciyaarta ayaana noqotay 1-1.
Dhammaadkii ciyaarta daqiiqadii 89-aad Chelsea ayaa gool ka heshay dhaliyaheeda Diego Costa kubbad dhinac ka timid ayaa waxaa madaxa ugu taabtay Batshuayi waxaana goosha ka toogtay diilinta ganaaxa bannaankeeda Diego Costa oo laad taraarax ah dhex dhigay shabaqa.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Chelsea FC vs West Ham United 2-1 (Conte oo guul ku bilowday)
Dick Advocaat oo iska casilay shaqadiisii xulka Holland